Otu esi eji igwe eji eme ihe nke oma. Mụọ nke ị ga-eji. | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Daniel Palomino | | Nzughari
Oge ọ bụla ha hụrụ ọzọ imegharị ihe maka iji mmiri n'okporo ámá ebe ọ bụ na ndị mmadụ ji nwayọọ nwayọọ mara ma malite Egweri, ọ bụ ezie na maka ndị kachasị ọhụrụ enwere obi abụọ ọ bụla.
N’isiokwu a, anyị ga-akọwa maka imegharị ihe, iwu 5R, igwe anaghị achagharị na ihe enwere ike imegharị na nke ọ bụla na ihe na-abụghị, na mgbakwunye na ụfọdụ igwe eji arụ ụlọ, ezigbo nsogbu bụ ịmalite ịmalitegharị maka oghere Na ụlọ.
2 Iwu 5R
3 Ihe eji eme ihe
3.1 Ngwunye Yellow
3.2 Bulie akpa
3.3 Akpa Green
4 Imegharị bins n'ụlọ
Ntughari bu usoro nke choro gbanwee ihe mkpofu na ngwaahịa ohuru ma ọ bụ maka okwu maka ojiji ya ọzọ.
Iji usoro a zuru oke, ihe anyị na-egbochi bụ iji ihe ndị bara uru bara uru, anyị nwere ike belata oriri nke akụrụngwa ọhụrụ ma belata ojiji nke ike maka okike ya. E wezụga nke ahụ, anyị na-ebelata mmetọ ikuku na mmiri (site n’igba oku na ebe mkpofu n’otu n’otu), ma belata kwa anwuru gas.
Ọ dị mkpa ka egweri kemgbe recyclable ihe na- ọtụtụ dị ka: ihe ndị dị ka eletrọniki, osisi, akwa na akwa, ọla na mmanụ anaghị a ferụ, na ihe ndị kachasị ewu ewu dịka akwụkwọ na kaadiboodu, iko na ụfọdụ plastik.
Ntughari bu ihe di mkpa iji belata ihe mkpofu (otu n'ime nsogbu gburugburu ebe obibi anyị na-enwe ugbu a) na ọ bụ akụkụ nke ise nke 3Rs, iwu bụ isi nke ebumnuche ya bụ iji nweta ọha mmadụ na-adigide.
Belata: bụ omume emere iji belata mmepụta nke ihe nwere ike ịla n'iyi, jiri usoro ịzụta ihe, iji ngwaahịa kwesịrị ekwesị ma ọ bụ zụta ngwaahịa na-adigide.
Ọ bụ omume mbụ anyị kwesịrị itinye n'ụlọ anyị ebe ọ bụ na anyị ga-enwe nnukwu nchekwa nke "akpa" yana ohere na ihe iji megharịa.
Ndozi: E nwere enweghi ngwụcha ihe na-adaba na nke a R. Ezubere ịpụ oge bụ naanị ihe megidere ya na ọ bụ ihe ị ga - alụ ọgụ.
Ihe niile nwere ngwọta dị mfe na nke mbụ anyị ga-anwale ịrụzi ngwaahịa ọ bụla, ma ọ bụ arịa ụlọ, uwe, ngwa elektrọnik, wdg.
Jiri ọzọ: bụ omume ndị na-enye ohere ịmegharị ihe ụfọdụ iji nye ya ndụ nke abụọ, yana otu ma ọ bụ ojiji dị iche.
Nke ahụ bụ, usoro iji dozie ngwaahịa na ịgbatị ndụ ha bara uru.
Nweta: Anyị nwere ike weghachite ụfọdụ ihe site na ihe mkpofu ma kewapụ ha iji nye ha ihe ọzọ, ihe atụ a na-ahụkarị na-abụkarị nke ọla enwere ike ikewapụ site na ngwa dị iche iche anyị tufuru ma nwee ike iji ya ọzọ.
Egweri: Anyị ahụworị ya, ọ bụ usoro a na ọrụ mkpofu ahịhịa dị mkpa yana ọrụ ọgwụgwọ na-enye ha ohere ịbighachi ha n'ime usoro ndụ.
A na-eji nkewa ahihia nke oma eweputa uzo kwesiri.
Mgbe anyị kwuchara ihe a niile, anyị ga-aga bins ndị na - emegharị emegharị, nke dịka ị maara, ndị bụ isi bụ 3 odo, acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Maka ndị kachasị ọhụrụ na nke a na nke kachasị ndị agha mana ka nwere obi abụọ ụfọdụ, a na-eme ha ugboro ole na ole (kwa afọ) usoro nkuzi gburugburu ebe obibi ma obu mmemme banyere mkpofu na imeghari, ebumnuche nke ime ka a mata ma mata mmetụta gburugburu ebe obibi nke mkpofu ahihia, yana usoro nchekwa gburugburu ebe obibi iji belata ya.
Ndị a na-emekarị mkpọsa ma ọ bụ mmemme a Junta de Andalucía, Andalusian Federation of Municipalities and Provinces (FAMP), Ecoembes na Ecovidrio Ọ dịkwa mma ka ndị mmadụ mata etu esi emegharị, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ndị taa n’amaghị nke ọma etu esi emegharị emegharị.
Saịtị ndị a na-enye ozi na ndụmọdụ banyere etu esi emegharị n'ụzọ pụrụiche na nke ahụ bụ, ịmalite ịmegharị, anyị ga-amata ihe bụ ahihia ulo: bụ ndị a na-emepụta n'ụlọ n'ihi ihe omume ụlọ.
Kacha ugboro bụ foduru nke organic okwu, plastic, metal, akwụkwọ, kaadiboodu ma ọ bụ iko containers na katọn. Na, dịka ị pụrụ ịhụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile nwere ike imegharị.
Site na obere okwu mmeghe nke m nyere, ugbu a m na-aga ebe ọ dị ezigbo mkpa: otu esi ekewapu mkpofu anyị na-ewepụta, maka nke a nhọrọ nkewa nke mejuputara ichikota ihe mkpofu na akpati di iche iche dika ihe ha jiri mara.
N'okpuru ebe a, bins niile na ihe mkpofu sitere na mpempe akwụkwọ ọ bụla:
Organic akpa na-anọgide: organic okwu na discards si ọzọ containers.
Yellow akpa: ìhè plastic containers, katọn, Mkpọ, aerosols, wdg
Blue akpa: kaadiboodu na mpempe akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ.
Akpa Green: karama iko, ite, ite na ite.
Mmanụ mmanụ: mmanụ sitere n'ụlọ.
Sigre Point: ọgwụ na ngwugwu ha. A na-ahụ ha n’ụlọ ahịa ọgwụ.
Batrị akpa: bọtịnụ na batrị alkaline. A na-ahụ ha n'ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ gọọmentị.
Akpa akwa: uwe, akwa na akpụkpọ ụkwụ. Ọtụtụ mkpakọrịta nwere arịa na ọrụ nchịkọta.
Oghere oriọna: ọkụ, ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na ọkụ.
Ihe mkpofu ndị ọzọ: jụọ ndị isi obodo gị ebe ha nọ.
Ebe dị ọcha: nnukwu ihe mkpofu dịka matarasị, ngwongwo ụlọ, wdg.
Ugbu a, ndị a kachasị eji eme ihe bụ ihe ndị na-emepụta ihe (ihe ndị dị ndụ), odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha anụnụ anụnụ n'ihi na ha bụ ihe mkpofu nke anyị na-emepụta.
Anyị niile na-eji ihe karịrị 2.500 akpa kwa afọ, ịbụ ihe karịrị ọkara n'ime ha plastik.
Ugbu a na Andalusia (na m na-ekwu maka Andalusia ebe m si ebe a mara m data ahụ nke ọma) karịa 50% nke ihe nkedo plastik na-emegharị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 56% nke ọla na 82% nke katọn. Ọ dịghị njọ ma ọlị!
Ugbu a lee anya na okirikiri plastik na obere eserese eserese, ebe ị nwere ike ịhụ ngwa mbụ ma jiri ya mee ihe ọzọ.
Ikwusi akpa a, anyị ga-asị na mkpofu ahụ OBU ịga na akpa a bụ: akwụkwọ, kaadiboodu ma ọ bụ iko iko, bọket rọba, ihe egwuregwu ma ọ bụ hanga, CD na ngwa ụlọ.
Nkwanye: Hichaa arịa ndị ahụ wee mee ka ha belata olu ha tupu ha atụba ha n'ime akpa ahụ.
Na mbụ anyị ahụwo ihe a na-edebe n'ime ihe ndị ahụ, ma ọ bụghị ihe OBU Ekwesiri itinye ya n'ime ya ma na nke a ọ bụ: akwa bekee, akwa nhicha ma ọ bụ anụ ahụ, kaadiboodu ma ọ bụ akwụkwọ nwere mmanụ griiz ma ọ bụ mmanụ, mpempe akwụkwọ aluminom na katọn, na igbe ọgwụ.
Lelee okirikiri akwụkwọ na eziokwu na-atọ ụtọ.
Nkwanye: Kpoo katọn ndị ahụ tupu etinye ha na akpa ahụ. Ahapụla igbe n’ime akpa ahụ.
Kedu OBU A ga-edebe n'ime akpa a bụ: iko na iko ndị ejiri kristal, seramiiki, poselin na enyo, ọkụ ọkụ ma ọ bụ oriọna ọkụ.
Nkwanye: Wepụ ihe mkpuchi ndị dị na iko iko tupu ị kpọga ha na akpa ahụ n'ihi na ọ na-emebi usoro ịmegharị ihe
Maka nke ọ bụla 3000 karama iko otu lita nke a na-emegharị nwere ike ịchekwa:
1000 n'arọ nke mkpofu nke na-anaghị aga ebe mkpofu.
1240 n'arọ nke akụrụngwa ndị na-agaghị ewepụ site na okike.
Ẹkot ነዳጅ kilogram 130.
Belata mmetọ ikuku site na ihe ruru 20% site n'ichepụta nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ site na iko eji emegharị emegharị.
Ọ bụrụ na anyị apụ na arịa ndị a wee gaa nke kachasị mee ihe niile, nke ihe oriri, anyị nwekwara ike belata ma nwee ọfụma nke a ebe ọ bụ na ọbụna ihe ndị dị ndụ nwere ike gbanwee compost, nke enwere ike iji compost.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu gbasara compost ị nwere ike ịga leta edemede m na blọgụ nke m «Nzukọ na imegharị ihe na composting na Onodi na composting dị ka a n'efu ntule Usoro» ebe ị ga-amụta mkpa compost na etu esi eme ya n'ụlọ na mgbakwunye n'ịrụzi compost.
Imegharị bins n'ụlọ
Nsogbu di otutu ndi mmadu nwere abughi amaghua nke imeghari ma obu imeghari ihe ojoo kama “umengwụ” nke n’abia site na igota ihe ndi ahu ma obu nkewa n’ulo, ma obu n’ihi ohere ma ọ bụ ọnọdụ ọzọ.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enweghị ohere, ị nwere ike ijikwa na-enwe ike imegharị ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na yountanetị ị nwere ike ịchọta ọtụtụ echiche ma ọ bụ aro iji dozie ha na ụlọ gị, ụfọdụ, ọ bụ eziokwu na ha na-etinye karịa ma ọ bụ na-efu ego ma ọ bụ mgbe niile ka ị na-ekpebi na njedebe.
Dị ka m kwuru, ha na-efu ego dịka bins a na-emegharị ụlọ. Ọ bụ nke kachasị mma ma a bịa n'ọrụ, ị zụrụ ya ma jiri ya n'ụlọ.
Ndị ọzọ na-ewu ewu ma dị ọnụ ala karịa ndị m ga-egosi gị n’okpuru.
Site na bọket ochie ma ọ bụ igbe kaadiboodu ị nwere ike ịme bins nke gị dịka m mere dịka ọmụmaatụ n'oge ọkọchị na ụlọ akwụkwọ oge ọkọchị ebe m rụrụ ọrụ.
Na njedebe ụmụaka na-amụta uru nke imegharị ihe na karịa R ndị ọzọ ebe anyị na-ejigharị ihe iji nye ya ihe ọzọ ma anyị belata oriri ya.
Dị ka ị pụrụ ịhụ na e nwere ọtụtụ ihe ngwọta, dị nnọọ ị ga-ahụ ndị kasị mma n'ihi na ị.
Ọ bụrụ n ’ndapụta na ị dị ka m, enweghị oghere, ihe ndị a dị mfe dịka itinye nnukwu akpa n’elu igwe ịsa ahụ wee tụfuo ihe niile a ga - emegharị ma mgbe o juputara na ya gaa arịa ndị ahụ wee kewapụ ya ebe ahu.
Amaara m na ọ dị ọsọ ọsọ ma dịkwa mfe ịga ebe a na-emegharị akpa ma tụfuo ihe niile ebe ọ bụ na ịnwere ya ugbua mana nke ọ bụla nwere ihe ha nwere ma ihe dị mkpa na njedebe bụ na ị na-emegharị.
Enwere m olile anya na ọ rụọla ọrụ gị yana ị belata, imegharị ma jiri ya mee ka ndụ ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Ntughari bins, agba na ihe ọ pụtara
Omume zuru oke nke mkpesa banyere mkpirisi na-emegharị emegharị